Enintaona Taty Aorian’ny Voina : Manao Ahoana ny Fanarenana an’i Fukushima, Miyagi ary Iwate · Global Voices teny Malagasy
An'aliny no mbola tsy manan-kialofana, ary mihamafy kokoa ny fiainana, ho an'ny sasany, hatramin'ny nisian'ny voina.
Voadika ny 07 Avrily 2017 4:33 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Español, Italiano, Français, Deutsch, Română , नेपाली, عربي, 日本語, русский, English
“Shizugawa, Minami Sanriku (Miyagi) tazanina avy ao amin'ny Lisea Shizugawa.” Ravan'ny tsunami tamin'ny Martsa 2011 i Shizugawa, ary mbola eo am-pananerana ny faritra. Sary nalaina tamin'ny Oktobra 2016. Avy amin'ilay mpisera Flickr, Cheng-en Cheng. Zon'ny mpamorona: Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0).
Tamin'ny fiandohan'ny volana Martsa 2017, noraketin'ny Kahoku Shimpo, gazety Japoney mpivoaka isan'andro mitatitra ny avaratra atsinanan'i Japana, ny fivoarana vita nandritra ny enintaona farany tamin'ny fanarenana ny fiainan'ny mponina niharan'ny “loza telo soson'ny” taona 2011 nahitana fihovitrovitry ny tany goavana, tsunami ary ny loza noklearin'i Fukushima.
Ao Sendai, prefektioran'i Miyagi, iray amin'ireo prefektiora maro ao avaratra atsinanan'i Japana izay niaina ny horohorontany sy ny tsunami naterak'izany no misy ny foiben'ny Kahoku Shimpo. Vahoakan'i Miyagi an'hetsiny sy ny mpiara-monina manodidina an'i Fukushima sy Iwate no voatery nafindra satria nandrava tanteraka ireo tanàna amorontsiraka ny tsunami. Niharan'ny loza nokleary ihany koa ny Prefektioran'i Fukushima, ka mponina 160.000 no voatery nesorina tamin'ny tranony.
Enin-taona taty aoriana, manome tombatombana ao an-toerana mikasika ny fivoarana vita amin'ny fanarenana ny fiainan'ny olona ao amin'ny faritra ny tatitr-baovao manokana nataon'ny Kahoku Shimpo. Ahitana antontanisa avy amin'ny Minisiteran'ny Fanarenana ao Japana sy fanontaniana ireo olona nifindra toerana ny tati-baovao fanadihadiana nataon'ny gazety.
Ny toetoetry ny Trano Fonenana ao Fukushima, Miyagi ary Iwate
Nitatitra ny Kahoku Shimpo fa tamin'ny Desambra 2015, 77 isanjaton'ny fanarenana trano nomanina (災害公営住宅, saigai kouei juutaku) no vita tao amin'ny prefektioran'ny Fukushima, Miyagi sy Iwate. Tamin'ireo prefektiora telo, nahitana fahombiazana indrindra i Miyagi, izay 80 isa-jaton'ny fanarenana nomanina no vita. Nahavita ny 75 isanjaton'ny fanarenana kosa ny prefektioran'ny Iwate, raha 70 isanjato no tao Fukushima.
Enin-taona aty aoriana, mbola misy ny ezaka tsy maintsy atao mba hamindràna ireo olona nafindra toerana ao amin'ny toerana fampiantranoana vonjimaika (仮設住宅, kasetsu juutaku), ho any amin'ny toerana fampiantranoana maharitra. Eo amin'ny olona 80 000 eo no voatery niaina tamin'ny trano vonjimaika taorian'ny loza. Tamin'ny Desambra 2016, mbola 36 000 ny isan’ izy ireo.
Eo amin'ny 40 % n'ny olona avy ao Fukushima nafindra toerana tamin'ny taona 2011 no mbola miaina amin'ny toerana fampiantranoana vonjimaika. Nahomby kokoa i Miyagi satria 75 % mahery tamin'ireo mponina nafindra tamin'ny trano vonjimaika taorian'ny loza no efa voafindra amin'ny trano maharitra. Ao Iwate kosa, 34 % no voafindra.
Ny Toetoetry ny Asa sy ny Fiainana Andavanandro ao amin'ireo Prefektiora Telo
Nahita ny Kahoku Shimpo, fa 1 074 amin'ireo sekoly 1 100 (eo amin'ny 98 isanjato) ao amin'ireo prefektiora telo niharan'ny loza tamin'ny Marsa 2011 no efa nisokatra indray tamin'ny Desambra 2016.
Enin-taona aty aoriana, mazava fa ny fanarenana ny toekarena ao amin'ireo prefektiora telo no tena sarotra. Na dia eo amin'ny 100 isan-jaton'ny toeram-panjonoana ao Iwate sy Miyagi aza no efa miasa ankehitriny, dia mbola 30 % n'ny seranana fanjonoana kosa no nisokatra ao Fukushima.
Namely ny faritra midadasika misy tany fambolena ao amin'ireo prefektiora telo ny tsunami sy ny loza nokleary. Miyagi no nahavita nanarina ny 93 % ny tany fambolena voakasika, raha 66 % kosa ny tao Iwate ary latsaky ny 50 % ny tany azo nampiasaina indray ao Fukushima.
Tsy noho ny loza nokleary ihany izany. Tamin'ny tany fambolena 5400 hekitara niharan'ny loza tao Fukushima, 690 hekitara no miorina ao anatin'ny “faritra nokleary manokana”.
Tafarina tsara kosa ny fizahantany ao amin'ireo prefektiora roa, saingy, mbola lavitra aoriana hatrany i Fukushima. Niverina teo amin'ny 90 % noho ny talohan'ny loza ny tahan'ny mpizaha tany ao Iwate sy Miyagi, raha 75 % monja ny ao Fukushima.
Na izany aza, nitatitra ihany koa ny Kahoku Shimpo fa eo amin'ny atsasaky ny mponina ao amin'ny toerana morontsiraka no mahatsapa fa lasa sarotra kokoa ny fivelomana taorian'ny loza.
Efa Miomana amin'ny “Loza Lehibe Manaraka” ve ny Mponina?
Nanatontosa fanadihadiana marobe tamin'ireo mponina ao an-toerana sy ny olona nafindra toerana ny gazety mba hamaritra ny fivoaran'ny fanarenana sy izay niova tamin'ny fahitana ny loza nateraky ny tsunami. Tamin'ny teny fampidirany, hoy ny Kahoku Shimpo :
Nanatontosa fanadihadiana ny Kahoku Shimpo mba ahafantatra bebe kokoa momba ny fanentanana ny mponina manoloana ny tsunami. Hita tamin'izany fa 83,1 % ny mponina no nandray fepetra mba hiomanana amin'ny horohorontany sy tsunami manaraka. Na izany aza, 55,9 % ny olona nohadihadiana (mahery ny atsasany) no mihevitra fa tsy ampy ny fiomanana hiatrehana ny loza manaraka.
Ny Momba ireo Olona Nafindra Toerana avy ao amin'ny Prefekioran'ny Fukushima
Tamin'ny tatitry ny tsingerintaona, liana tamin'ny satan'ireo olona nafindra toerana avy ao amin'ny prefektioran'ny Fukushima ihany koa ny Kahoku Shimpo. Ankoatra ny horohorontany sy tsunami mahery vaika niainan'ity faritra ity, niharan'ny loza nokleary ratsy indrindra nateraky ny loza tao Japan ihany koa izy ireo.
Tamin'ireo mponina 160 000 nafindra toerana avy ao Fukushima, 63 000 no nafindra tany ivelan'ny prefektiora. Tamin'ny fiandohan'ny taona 2016, mahery kelin'ny 23000 ireo olona azo nafindra toerana indray tamin'ny trano maharitra ao Fukushima. Tamin'ny taona 2017, eo amin'ny olom-pirenena Fukushima miisa 40 000 no mbola monina ivelan'ny prefektiora misy azy ireo.
50 taona mahery ny ankamaroan'ireo olona nafindra toerana avy amin'ireo faritra niharan'ny loza ka mbola monina amin'ny trano fampiantranoana vonjimaika. Heverina fa sakana iray tamin'ny famindrana azy ireo indray amin'ny trano maharitra ny tetikasa fanorenana goavana handraisana ny Lalao Olaimpika Tokyo 2020 lasa mifaninana amin'ny fanarenana an'i Miyagi, Iwate ary Fukushima.